Vanopa kadhi kufudza katsi dzakarasika | Noti Katsi
Kadhi rekudyisa katsi dzakarasika?
Ukapa katsi dzakarasika, dzinogona kuzopedzisira dzabvunza iyo feeder kadhi. Ichi chikumbiro icho Inotanga kuitiswa mune mamwe maguta kuSpain senge Torrevieja (Alicante) kana El Vendrell (kubva kuBaix Penedès muCatalonia), kuitira kudzivirira zvirango uye matambudziko.
Nehurombo, kune matunhu mazhinji anorambidzwa kufudza katsi dzakarasika, kubhadharisa faindi kune avo vakazvipira kuvachengeta. Zvisinei, Nekadhi rino unogona kuenderera mberi uchidaro usingatore njodzi.
1 Ndeipi kadhi inodyisa kadhi?
2 Ndezvipi zvinodiwa zvinofanirwa kuzadzikiswa kuti uzvi kumbire?
3 Ndeupi rudzi rwechikafu chaunogona kuvapa?
4 Ungasarudza sei vanopa katsi dzakarasika?
4.1 Katsi kuchengeteka pavanenge vachidya
5 Imhosva here kudyisa katsi dzakarasika?
6 Nzira yekubatsira kurasika katsi?
7 Dambudziko rekitsi dzemusango rinowanda sei
8 Hupenyu uye hutano hweakarasika uye katsi dzesango
9 Nei Kugamuchira Feral Katsi Hakusi Sarudzo
10 Ungaudza sei katsi yakarasika kubva kukati yemusango?
11 5 Nzira dzaunogona Kubatsira Dzakarasika uye Katsi Dzemusango
Ndeipi kadhi inodyisa kadhi?
Ndiani mumwe asingazive kuti katsi dzakarasika dzinogara mumadhorobha kana kunyangwe mumataundi hadzina chinhu chiri nyore kuenda kumberi. Kune njodzi dzakawanda dzavanofanira kukunda zuva nezuva kana vachida kurarama, uye ini handisi kungoreva mota chete, asiwo kune vanhu vanovarwadzisa kana kuisa chepfu kwavari, kurwa nedzimwe mhuka, kutonhora kana kupisa, kune kusiiwa,…
Neraki, kune vazhinji vanozvipira vane hanya navo nekuvapa chikafu. Asi vane dambudziko: mumataundi mazhinji nemaguta zvinorambidzwa kufudza katsi idzi, uye mune mamwe akawanda vanogona kuzviita chete mune dzimwe nzvimbo.
Uine izvi mupfungwa, kadhi rinodyisa katsi hapana mubvunzo zano rakajeka, nekuti kune rumwe rutivi inobvumira vanozvipira kutarisira felines zviri pamutemoKune rimwe divi, zvakare zvinobatsira kumatunhu - nevanovachengeta, kunyanya - kuziva kuti ingani katsi koni iyi yakaumbwa uye nekwainowanikwa.
Ndezvipi zvinodiwa zvinofanirwa kuzadzikiswa kuti uzvi kumbire?
Haasi mazhinji, chaizvo: kukwanisa kuikumbira Unofanirwa kunge uri wezera repamutemo, unonyoreswa muguta kana dhorobha, uye hauna kupihwa chirango chekutyora mutemo maererano nenyaya dzemhuka.. Ipapo, iwe unongofanirwa kuenda kuhoroji yeguta reguta uko ichi chiyero chitsva chave kuitwa, uye ikoko ivo vachatora data rako ndokukupa iwe kadhi.
Parizvino inogona kuwanikwa chete mumatunhu eMalaga, Valencia, Lleida neTarragona, asi zvinofanirwa kutarisirwa kuti mamwe maseruya achajoinha chirongwa ichi.
Ndeupi rudzi rwechikafu chaunogona kuvapa?
Kare, uye nanhasi, katsi dzakarasika dzinowanzo kupihwa chero rudzi rwechikafu (chakaoma kana kunyorova), nokudaro zvichikwanisa kuve nezvichemo kubva kune vavakidzani nekuda kwetsvina inogona kuunganidzwa. Asi kuve mubati wekadhi unogona chete kuvapa chikafu chakaoma.
Uye zvakare, kana katsi dzichienda kune yakavharirwa (senge purazi kana chivakwa chakasiiwa), zvinodikanwa kuti zvirambe zvakachena, ndiko kuti, ivo vanofanirwa kubvisa zvituru uye nekuchenesa vanopa / vanonwa zuva nezuva.
Ungasarudza sei vanopa katsi dzakarasika?
Makati akarasika katsi shure kwezvose. Dzine ndebvu, kazhinji dzakareba, uye zvichidaro Ini ndinokurudzira kuti vanofudza vave vakawandisa sezvinobvira. Nenzira iyi, ivo havazonzwa kusanzwisisika chero nguva, izvo zvinogona kuvabatsira kudya zvakanyanya kuda.
Uye kwete, haufanire kutenga vanopa katsi saizvozvo. Ndiro dzinoshandiswa kuisa pasi pehari dzakanakira ivo, sezvo ipfupi uye iine dhayamita inonakidza.
Kunze kwezvo, isu hatigoni kumira kutaura pamusoro pemutengo: nepo iyo yepakati-yemhando feeder inogona kukubhadharira iwe ma5 euros, yakapusa poto ndiro mune chero chitoro kwavanotengesa zvese zvinogona kuita isingasviki 1 euro.
Sarudza iwo epurasitiki kana simbi isina chinhu, uye gezai zuva nezuva, kunyanya kana uine ivo kunze kwezuva rese. Zvingangoitika.
Katsi kuchengeteka pavanenge vachidya
Izvo zvakakosha kwazvo izvo feeders vari munzvimbo yakachengeteka, semuenzaniso, pakati pemiti midiki, kana zvirinani zvakadaro, mukati mechiteshi kana imwe nzvimbo senge iyo muridzi wakakupa mvumo.
Kana iwe uine mhuka dzine furry mubindu, usazeze kudzigadzira imba diki, ingave yakagadzirwa nemablocks, kana kuitenga imwe. imba yekatsi.
Nzira yekubatsira kurasika katsi
Imhosva here kudyisa katsi dzakarasika?
Haufanire kudaro. Zvinoitika ndezvekuti pakawandisa katsi, uye nanhasi zvichiri kutendwa kuti kuvarega vachifa nenzara kana kuvaendesa kunopira, kugadzirisa dambudziko. Uye zvirokwazvo kwete.
Zvakaratidzirwa kuti kutemerwa (ndiko kuti, kubviswa kwenhengo dzokubereka nadzo) dzese katsi dzevakadzi uye katsi dzinobatsira zvakanyanya kudzikisira huwandu hwenhengo, uye sezvinei, kuona kuti mhuka idzi dzine hupenyu hwakanaka. Kana zvabairwa, zvinoitika mune nyaya yenguva pfupi ndeyekuti katsi nyowani dzinoonekwa dzinozadza izvo 'zvisina'.
Vanodzivirira pachibvumirano chakaitwa chekupa aya akakosha makadhi Ivo zvakare vakazvipira kune kuzivikanwa uye kutonga kwemakoloni, kuti vaite macastration Campaign kudzivirira kuti dzimwe katsi dzinopedzisira dzagara mumugwagwa, uye, pakupedzisira, kuti idzi mhuka dzine mvere dzine hupenyu hwakanaka.
Nekudaro, iwe unofanirwa kuziva izvo Kana katsi dziya dzikaenda kugaraji rako kana kubindu rako, kana kune iya yeshamwari kana hama isingade mhuka idzi, kunyangwe iwe uchigara munzvimbo inorambidzwa, hapana munhu anogona kukuudza chero chinhu., nekuti iwo furry anoenda kune yega chivakwa. Chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya chingave chako kuti uvape chekudya munzira huru yeruzhinji; ipapo hongu vanogona kukutemera kunze kwekunge vapa kadhi rekudyisa katsi.
Nzira yekubatsira kurasika katsi?
Makati emusango kana katsi dzakarasika: Tine mazita mazhinji ezvinoshamisa felines izvo isu dzimwe nguva tinoona zvichidongorera kubva pasi peberere redu kana kusvetukira muzvivakwa zvakasiyiwa Nekudaro, mazhinji acho anogovana mugumo mumwe chete: hupenyu hupfupi uye hwakaoma. Neraki, kubatsira katsi dzesango kana dzakasiiwa hakuna kuoma. Uye iwe unogona kuita yako diki.
Dambudziko rekitsi dzemusango rinowanda sei
Kutanga, chii chinonzi feral kana kurasika kati? Katsi inovhara kana yakatsauka "chero katsi yakanyanyisa kusangana nevanhu kuti isadzorwe. Zvakare hazvigone kuiswa mudzimba chaiyo chipfuwo. Vanowanzo kuve vazukuru vematsi akarasika kana kusiiwa nevaridzi vawo, uye kukura kwete kushamwaridzana nevanhu.
Nekuti kati inogona kubata pamuviri kubva pamasvondo gumi nematanhatu ekuberekwa uye kuva nemarara maviri kana matatu pagoreSezvo huwandu hwenzvimbo yekati uye matambudziko ane hukama nazvo achikura nekuenderera.
Hupenyu uye hutano hweakarasika uye katsi dzesango
Katsi dzakarasika dzinowanzo gara panze, dzinonzvenga mota, uye dzinodya kubva mumagaba emarara; vane hutachiona kumeso, kurwara, uye kutenderera kusingaperi kwemimba. Ivo vanotambura zvakanyanya mukurapwa uye nemamiriro ekunze. Hupenyu hwekatsi, kurasika, kana kusiiwa katsi kazhinji kazhinji hupfupi, dzimwe nguva hwakareba, hunongogara makore maviri kana matatu chete.
Ehe, katsi dzino feral dzinosiyawo matambudziko pamusuwo wevanhu, kusanganisira kurwa zvine ruzha, hwema, kuita weti kutara ndima (inozivikanwawo se "yakasaswa" kana "yakamisikidzwa"), nhata, uye nekurera kusingadzivisike kunogadzira. Kunyange katsi dzakawanda dzisingadiwe. . . Nyanzvi zhinji dzinobvumirana kuti imwe yedzakanakisa nzira dzekubatsira fati katsi uye mapoka ekitsi, anonzi makoloni, iri kuburikidza nehurongwa hwekuita mbanje.
Nei Kugamuchira Feral Katsi Hakusi Sarudzo
Nyanzvi zhinji dzinobvumirana kuti katsi dzesango zviri nyore hazvigoni kupingudzwa. Idzo imhuka dzesango, senge macarcoon uye iwe unogona kudzichengeta, asi usingavanyimi rusununguko rwavo, uchivatora kuti vadzivirire uye vovaita dewm, asi gare gare, uchivasiya vadzokera kumba kwavo, unova mugwagwa.
Ivo vanowanzo gara kure nevanhu, vanohwanda mukati mezuva, uye vanonetsa kwazvo kusangana kana vakagamuchirwa. Kungofanana iwe haungamboedza kudzora raccoon, haufanire kuedza kuchengeta katsi yemusango.
Asi katsi diki, kunyanya idzo dzisingasviki masere masere ekuberekwa, dzinogona kazhinji kusangana. Katsi dzakasiiwa uye dzakarasika dzinogona zvakare kudzoserwa muhupenyu hwemumba. Ikatsi dzakura dzakarasika dzinogona kunge dziine matambudziko ekushamwaridzana zvakanyanya.
Ungaudza sei katsi yakarasika kubva kukati yemusango?
Vakarasika kana vakasiyiwa felines vanowanzo gadzikana vakatenderedza vanhu uye vanowanzoedza kugara padhuze nevanhu, pasi pevharanda, kana mumagaraji, sheds, kana kumashure.
Hatisi kutaura nezve katsi dzinochinja uye nekudzikanda. Zvatiri kutaura chaizvo ndezvekuti akakwanisa makoloni, aine munhu kudyisa katsi, achivachengeta, achipa kurapwa uye pekugara. Nenzira iyi, katsi makoloni haazove dambudziko uye kati uye vanhu vanogona kugarisana pasina kubvisa katsi kubva mumigwagwa.
5 Nzira dzaunogona Kubatsira Dzakarasika uye Katsi Dzemusango
Kubva padiki kusvika pane huru, pane nzira dzakawanda dzekubatsira feral uye akarasika katsi. Heano mamwe matipi aunogona kutanga kuita nhasi:
Usape chinetso. Izvo zvinopera pasina kutaura kuti iwe unofanirwa kurasisa uye neuter yako wega katsi. Izvo zvinodawo kuti iwe uchengete katsi dzako mukati memba yako, kwete chete kuitira kuchengetedzeka kwavo, asiwo kuvadzivirira kuti vasarasike uye kupedzisira vave chikamu chekoloni yemusango.
Usape chikafu uye kanganwa mhuka dzesango. Kudya katsi dzakarasika uye feral kune rupo, asi ivo vanodawo kurapwa. Kana iwe usingakwanise kubata kuenderera kutarisirwa, zvirinani kuraya kati.
Mari shoma. Nemari shoma iwe unogona kubatsira katsi zvakanyanya, zvekurasa kana neutering. Kupa mari kunzvimbo dzemhuka kana masangano ekati kunozovabatsira kubatsira katsi zvakanyanya zuva rega rega. Iwe unogona zvakare kupa mari kumapoka ekuchengetedza mhuka kuburikidza nenhaka kana kuda.
Zvipire nguva yako. Masangano anowanzo shandirwa nemasangano asingabatsiri anoenderana nerubatsiro rwevanozvipira. Kana iwe usingakwanise kubatsira munzvimbo yekiriniki, unogona kutora chikamu padanho renharaunda, kubata vezvechiremba vemuno nemabhizinesi, kunyora tsamba, kukwidza mari, kana kuhaya dumba pachiitiko chemunharaunda.
Iva muchengeti wekoloni. Mukoloni inotarisirwa, katsi dzinogona kurarama pakati pemakore gumi nemaviri negumi nematanhatu. Kana iwe uchifunga kuti unokwanisa kuendesa inogara pekugara, chikafu, kana kurapwa kune boka rekati dzakarasika, bata boka rezvemhuka kuti uone kuti ungatanga sei. Asi usati waita, nzwisisa kuti kuzvipira kutarisira koloni ibasa rakakura. Iyo nyuchi inoenderana newe, sekunge imba yekatsi. Kana iwe uchienda kana uchifamba, zvakakosha kuti iwe utsvage mumwe munhu wekutarisira katsi iwe usipo.
Sechikamu chekugara munharaunda yakabudirira, chisungo chedu kuchengeta vasina simba, vanorwara kana vasina simba. Basa redu rinosanganisira mhuka dzinovaraidza, dzatinotora kubva kune zvakasikwa uye dzinovimba nesu.
Nezvose izvi, tinoda kutaura kuti pakuchengeta katsi dzakarasika, deworming, sterilization, pekugara, chikafu uye kurapwa kwakakosha. Iwe unogona kuona kuti koloni yemakati inogona kurarama nemufaro kwemakore mazhinji. Chero bedzi iwe ukazvipira kwavari uye kuti hapana chinoitika kwavari. Makati aya anokuda sekunge yaive mhuka yekumusha ... kunyangwe kana vachida kugara murusununguko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Noticias » Kadhi rekudyisa katsi dzakarasika?
Ro de Vir (@RocioTech) akadaro
Kana, semuenzaniso, iwe ukawana rezinesi rako muValencia, asi iwe uchipa chikafu katsi dzemumigwagwa muMadrid, unobvisa iyo faindi kana kwete?
Unogona here kutora kadhi rako pamhepo wobva waritumira kumba kwako kana rinofanirwa kunge riri mumunhu?
Pindura kuna Ro de Vir (@RocioTech)
Mhoro Ro de Vir.
Mukutaura, makadhi anongokupa mvumo yekufudza katsi muguta rawawana iro. Kuti udyise katsi kubva kune imwe nzvimbo, iwe unofanirwa kukumbira imwe kadhi kana imwe mvumo kubva kuimba yemunharaunda yeguta. Kuti ubvunze kadhi unofanirwa kuenda iwe pachako.
Sandra Milena akadaro
Mhoro Zuva rakanaka Monica.
Ndinoda kuziva kwandinofanira kuenda kuti ndione kuti ndivanaani vanotora rubatsiro kukanzuru yeguta, kunwisa kittens? Ndine zvikoloni zvitatu (makumi mashanu nemashanu + makumi masere nezviviri) zvemari yangu uye sterilized 3 kubva mumugwagwa, nekuti yangu yese inoshandiswa, asi kune yakawanda koloni uye ini ndatoona akati wandei kittens ... Ndatenda
Ndiri kugara muMont-roit bahia (Tarragona)
Pindura Sandra milena
Ndine hurombo asi handizive kuti ndokuudza sei.
Mukutaura, makanzuru eguta anokupa iwe kadhi anofanirwa kukwanisa kukuzivisa nezvese. Kana zvisiri, vadziviriri venzvimbo.
Ndinovimba vanogona kukuudza chimwe chinhu, kuti 60 katsi ... zvinosanganisira zvakawanda mari zhinji.
Ndinovimba kuti munguva pfupi kanzuru yeguta reSalamanca inosarudza kutora iyi nhanho
Hongu, tinovimba kuti matunhu ese emakanzuru anotora danho iri. Kwaziso 🙂.
Mhoro Monica, ndinoda kuziva kuti mumaguta api makadhi akaiswa, mune ruzivo nezveSpain yese here? Izvo zvaive kuitira kufurira kanzuru yeguta reMalaga, nekuti kunyangwe hazvo vakati vaizopa, zvirinani handina kuwana kwekuiwana. Uye iwe unenge uine ruzivo rwekuti chirongwa cheCES chakatosimwa kupi, mumaguta eQ uye q yatomisa hupenzi uhu hwekuuraya katsi dzakawanda kwazvo nekuda kwekusaishandisa.Takaneta neizvi.Hapana dzidziso yemhuka.Vanhu havasati Vagamuchire mumakoloni kunyangwe ivo vakachena, vane hutano, castrados.Zvaizodikanwa kudzidzisa huwandu hwevanhu 1.
Mhoro. Ndinogara mutaundi riri muValencia (Antella) kuti ndive nekadhi rekudyisa katsi dzemusango mune horo yedhorobha yavanondipa, mutaundi kana muTown Hall yeValencia. Thanks8
Ndinonzwisisa kuti kanzuru yenzvimbo yega yega inovapa. Asi ini ndinokurudzira kuti ubate sangano muValencia iro rakatsaurirwa kutarisira katsi dzakarasika kuti vagokuzivisa iwe zviri nani.
Ini ndakazvibvunza, asi parizvino chete nzanga dzandinotaura muchinyorwa dzakazviita kana kuti vari kuita
Nezve iyo CES, inoisirwa muPalencia, Zaragoza, neMogán (Las Palmas de Gran Canaria). MuMadrid sezvandinonzwisisa zviri kuitikawo.
Pachine zvakawanda zvekuvandudza mune izvi. Ini ndinonzwisisa kushushikana kwako, nekuti muno muMallorca hupenyu hwekitsi dzakarasika hausi nyore zvakare.
Ndinovimba mamiriro acho anovandudzika.
Ini ndiri Palentina uye kuti ndinoziva pano x zvinosuwisa hapasati paine nzira yeCes yekudzora makoloni emakiti, ndinovimba munguva pfupi ndinogona kutaura zvimwe
Nei zvichirambidzwa kupa katsi mumugwagwa muCatalonia kana mhuka dzichidzivirirwa muCatalonia? Hazvina musoro.
Iwe unoziva kana Manises iri iro kadhi rakafanana neValencia kana kuti rinofanirwa kunge richibva kumasipare ino.
Zvakanaka, ndinofunga kuti maseru ega ega anenge aine kadhi rake, achifunga izvo zvakatanga kuitwa kwandinogara (Mallorca). Masipala akatanga kupa rudzi urwu rwekadhi.
Iwe unoziva here kana yatove yakasimwa muMadrid uye kwaunofanirwa kuenda ndokubvunza iyo Nharaunda kana iyo Kanzuru yeGuta
Ndanga ndichiferefeta uye ndingati ivo vakatozviisa muMadrid. Kana zvirizvo, unogona kuzvikumbira kuKuta Horo.
Mª Trinidad Reina akadaro
Mhoroi, iwe unoziva here kana yakaiswa muSeville kana kuti zvirinani inoda kudyara
Pindura MªTrinidad Reina
Parizvino hapana chandinoziva, asi handifunge kuti zvichatora nguva. MuMijas (Malaga), semuenzaniso, yatove kuitwa.
Unofanira kumirira. Kuona kana vachizviisa munguva pfupi.
Ndinokutendai, uye ndinovimba vachazviisa nekukurumidza, nekuti zvinosuwisa kuti kune vazhinji vasingazivi uye vanopokana nekatsi uye vanotora chikafu nemvura kubva kwavari. Uye izvo zvinofanirwa kunge zvichikwanisa kutaurwa sekushungurudzwa kwemhuka ...
Hongu, ndinobvumirana zvachose. Uye zvimwe pavanoziva kuti iwe unochengeta zvese izvo zvinodhura zvinovatarisira ... Zvisinei. Ndinovimba vachazviisa munguva pfupi iri munharaunda dzese.
Esther Velarde Salguero akadaro
MuBasauri, Vizcaya takagara nekadhi kubva munaKurume.
Orozko zvakare ave nayo muVizcaya kwenguva yakareba.
Mufaro kune vese vanoda katsi
Pindura kuna Esther Velarde Salguero
Zvikuru izvo. Ndiri kufara chaizvo. Iyo kittens inogona kudzikama más
maria valle akadaro
Mhoroi, ini ndiri Maria uye ndiri kukumbira, ndapota, muBenidorm, vhura izvozvi kuti unyore kadhi rekufudza katsi, ndapota, mazuva ese, ndinofanira kurwa nevanhu uye vandityisidzira kundimhan'arira kuti ndinodyisa kittens, maita basa, nekukurumidza kuziva
Pindura kuna Maria Valle
Mhoro Maria Valle.
Ndine urombo kuti unozviona uri panguva iyi. Pachine zvakawanda zvekufambira mberi munyaya yemhuka 🙁
MuTorrevieja (Alicante) Ndinoziva kuti rudzi urwu rwekadhi ruri kutopihwa, asi muBenidorm… Ndakatsvaga ruzivo uye handina chandakawana. Saizvozvo, imba yedhorobha inogona kukupa iwe rumwe ruzivo.
zvakawanda. ndatenda monica zvakanaka hapana chinoitika ini ndicharamba ndichidaro saka mhuka ndidzo chikonzero changu chekurwa nekutenda neruzivo kukwazisa kwakanaka
Mhoroi, ini ndaimbomupa chikafu pamwe nehuku dzake, kunyange hazvo ava ega kubva pakagamuchirwa Kittens Kana ndikafunga kutora kadhi kuti ndimudyise, ndedzipi zvimwe zvisungo zvandinazvo nekadhi iro, riri kuMadrid, ndine urombo nekuti akaonda zvakanyanya kunyange ndichitya mhuka, ndinovaremekedza uye ndinovabatsira kurarama. Ndatenda
Kadhi haritakuri chero chisungo 🙂
Iko inokutendera iwe kufudza katsi dzakarasika zviri pamutemo.
Mhoroi, ndafonera 010 nhasi, iyo inobva kuMadrid City Council uye vakandiudza kuti izvi hazvipo uye zvinorambidzwa kufudza, munoziva kana vakandizivisa nemazvo
Ini ndichaenderera mberi nekupa chikafu
Zvakanaka, sezviri pachena hongu, ivo vakakuzivisa iwe mushe. MuMadrid havasati vainayo 🙁
omar Abjiou akadaro
Muvakidzani anoda kundimhan'arira nekupa chikafu Kitsi Dzakatsauka muAlgemesi, ndinoda kuziva kana zvakarambidzwa nemutemo kana kwete. Kwaziso ...
Pindura kuna omar Abjiou
Sezvo ini ndinonzwisisa izvi, muValencia capital ivo vaida kuishandisa, kana vasati vatomboita zvakadaro, kadhi rekudyisa katsi dzakarasika. Asi vanhu venharaunda havazive kana zvichiri kurambidzwa, ndine urombo 🙁. Unogona kufonera horo yeguta kuti uone zvavanokuudza.
Ndinovimba yatove pamutemo kuvapa chikafu.
Mhoroi, ndinoda kuziva kana muCascante Navarra ivo vachipawo kadhi, kuti vakwanise kufudza katsi mumugwagwa, sezvo mapurisa akaenda kunoudza Viso kuti mune inotevera ndaizomhan'ara, asi ndinovapa ku musuwo kubva kugaraji rangu, ikozvino zvandinoita ndinovhura garaji rangu ndovaisira zvekudya ivo vopinda uye kana vapedza kudya vanoenda, ndinogona kumhan'ara zvakare nezve zvandinovapa mukati megaraji rangu kana kwete, uye kana ivo ndipe kadhi kwandinga riwane, ndatenda zvikuru.
Pindura kuna Georgina
Ndanga ndichiferefeta uye zviri pachena kuti havazvipe. Zvisinei, iwe unogona kubvunza kuItaundi Horo.
Asi kana iwe ukavafudza mugaraji rako hapana chavanogona kukuudza iwe chero chinhu. Iyo garaji ndeyako, inzvimbo yakavanzika, saka dzikama 🙂.
Ndinokutendai zvikuru, Monica, ndinoramba ndichipa kitsi mukati megaraji rangu, vanodya uye ivo vatanhatu vanoenda pamwechete kwavanoziva kuve.
Ndinokutendai nekushandisa nguva nemari kuchengetedza katsi dzakarasika 🙂.
Monica nicoleta Marin akadaro
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Monica uye ndichiri kufudza kittens dzemugwagwa, zvinozivikanwa here kana ndikazowana rezinesi rangu muBenalmadena? Ndatenda
Pindura Monica nicoleta Marin
Ndatsvaga ruzivo, asi handina chandakawana nezvazvo.
Ndinoziva kuti muMalaga ivo vari kutopa makadhi erudzi urwu, asi muBenalmadena handizive, ndine urombo.
Pamwe horo yeguta inogona kukuudza chimwe chinhu.
Mhoroi, isu tiri kufudza katsi dzinoverengeka muyadhi yedu. Vasati vauya ndokudya chikafu chembwa, saka takafunga kuvatengera chikafu chekatsi, nyaya iripo ndeyekuti pane katsi yakazvara kanoverengeka uye ikozvino sezvo ichibvumidzwa kubatwa isu tave kuchidzivirira.
Ndine mubvunzo, vavakidzani vanogona kundimhan'arira here zvekuvadyisa mukati mepatio? Ini ndinotaura izvi nekuti ini ndave kutanga kuve nematambudziko sezvo ivo vatikanda masardine matsva nemapini akati wandei akanamirwa mukati, uye makumi mapfumbamwe akasununguka mapini akapararira mumirwi yakawanda yakatenderedza patio. Mangwana ndichaenda kunomumhan'ara kumapurisa, nekuti ndinofunga zvavakaita zvinotyisa uye nevanhu vakaipa, pamusoro pekupinda mumba mangu.
Ndokumbirawo kuti mundiudze kana paine kadhi rakadai mune hanzvadzi mbiri?
Ndinokutendai zvikuru uye kukwazisa
Pindura kune Yakachena
Kwete, kana iwe ukavapa chikafu mukati mepatio yako hapana chavanogona kukuudza chero chinhu, sezvo chiri chivakwa chega.
MuDos Hermanas ndakatsvaga ruzivo, uye handina kuwana zvakawanda, izvi chete Platform.
Kukurudzira kwakawanda, uye ndinokukurudzira kuti uite kunyunyuta uku. Izvo zvavakaita zvakashata kwazvo.
Mhoroi, kana ndisina kukanganisa muMadrid Capital ivo vatopa iyo feline koloni feeder kadhi.
Kana muvakidzani akandimhan'arira, kana ndine rezinesi, ndingabhadhariswe faindi here?
Ndinozvitaura, nekuti gore rimwe chete rapfuura ndakadana mapurisa, asi havana kundipa faindi yekuve kekutanga. panguva ino, kana ndisina kukanganisa, pakanga pasisina rezinesi.
Ehe, kuMadrid vanotanga kuvapa: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/02/13/madrid/1486987447_007158.html
Kana iwe uinayo woenda nayo newe, haugone kubhadhariswa faindi.
Mhoroi, ndanga ndichida kukubvunza chimwe chinhu
Ukapa chikafu chakaoma chete
Katsi dzinoshaya mazino kana kurwara? Chikafu chakasarudzika chekatsi hachisi nani here?
Hongu, kana katsi risina mazino, kana kana richirwara, zviri nani kuripa chikafu chakanyorova kana kunyudza chikafu chakaoma nemvura.
Vanogona kukurambidza iwe kufudza katsi mune yakaoma yakagara kwemakore mazhinji vachiti zvinorambidzwa nemutemo weCity Council?
Kanzuru yeGuta kunyanya ndeyeSan Bartolomé de Tirajana muCanary Islands. Ndatenda.
Maererano ne chitsva ichi, unofanirwa kukumbira kadhi kuti uenderere mberi nekudyisa katsi, zvikasadaro unogona kubhadhariswa faindi.
Mhoroi, ini ndinobva kuAlicante uye ndinoda kuziva kana vachipa kadhi irori pano uye kwandinga riwane. Ndatenda
Maererano ne chitsva ichi, hongu, ivo vanotoipa ipapo.
Mhoro Monica, unoziva here kana muTorrejón de Ardoz, (Madrid) vanopa iri kadhi kufudza iyo
katsi? Ini ndinofudza nekunwawo katsi dzemumugwagwa uye ndatova nematambudziko.
Asi ndine kukahadzika kuti katsi dziri munzvimbo yechikepe chisina chinhu, chikafu chinoiswa pavari
munzvimbo iyo, iri mumugwagwa? Ini ndinofunga chikepe chisina chinhu ndechemumwe chikepe chinobva kuna al
kudivi iro kana kuchigarwa.
MuMadrid guta guru ndinoziva iri, asi muTorrejón de Ardoz ndanga ndichitsvaga ruzivo uye ini handina chandakawana.
Nezve mumwe mubvunzo wako: kana ngarava iri yemumwe munhu waunoziva uye vakakupa mvumo, hapana chavanogona kukuudza. Uye kana iwe usingazive muridzi, ini ndinokurudzira kuti iwe uedze kumubata uye umubvunze, zvingangoitika.
Mhoro Monica, ndave kukuudza nezvenyaya yangu. Ndiri kufudza nekunwa dzimwe katsi dzemugwagwa uye
Mazuva mashoma apfuura, mapurisa maviri akauya kwandiri achindiudza kuti zvairambidzwa uye nekuda kwechikonzero ichocho
yekunyunyuta nefaindi inoenderana. Ndakafonera Animal Protector
yemuno, kuitira kuti vandizivise zvandingaite kubatsira katsi
kuti chirongwa cheCES chiripo uye katsi dziri mumakwenzi echikadzi anotarisirwa nekupihwa chikafu
kuzvipira, ini ndakatozvipira kuzvipirawo, asi Mudziviriri haana kukwanisa
gadzirisa chero chinhu. Ini handidi kusiya mhuka idzi dzasiyiwa kune ramangwana radzo dzofa
yenzara nenyota, ndanyorera kumasangano akati wandei muDziviriro yeMhuka uye kunyange
Ini ndataura PACMA (Anímalista Party Kupesana Nekushungurudzwa Kwemhuka).
Ini ndinoramba ndichivapa chikafu ndichifunga mhedzisiro, ini handikwanise kusiya izvi
vakurudzire zvakadaro zvakadaro.
Kutenda nemhinduro yako yapfuura uye kana uchikwanisa kundipa rumwe ruzivo nezve kuti sei
batsirai katsi dzemumugwagwa, ndinokutendai nemhuka dzakanaka idzi.
Iko kune peji riri kuunganidza masiginecha kuti iyo Torrejón de Ardoz Kanzuru yeGuta
(Madrid) ipa kadhi feeder kadhi, ini ndaisa peji apa:
Cat feeder kadhi Torrejon de Ardoz Town Hall uye unofanira kupinda Chikumbiro.
Chekutanga pane zvese, ini handizive kuti kuvapa izvo kunogona kurambidzwa sei. Mari yacho inofanira kushandiswa mukusimudzira ruzivo uye kusarerekera mishandirapamwe, pane kuvabhadharisa kuvapa chikafu. Spain iri kumashure kwazvo munhau dzemhuka. 🙁
Asi zvinosuruvarisa, kana mune imwe nzvimbo ivo vachiri vasina kupa kadhi, kana vakakubata vanogona kukubhadharisa. Ehe, katsi dzinoda kudya mazuva ese. Wakatarisa here kuvaendesa kune imwe nzvimbo? Zvichida kunharaunda yenyika, kana zvimwe zvakavanzika. Neizvi zvirokwazvo mudziviriri anogona kukubatsira.
Ini ndinobva kuBadalona, ​​Barcelona uye kune katsi inouya kunharaunda yangu mazuva ese kuzopihwa chikafu, iye anototanga meowing achikumbira chikafu. Nezuro muvakidzani akakanda chikafu mumarara ndokumira akarinda pamusuwo wake kuti aone kana paine munhu angaunza chimwe chikafu uye pasina chaakataura, ndakazodzikisira kati zvakare.
Mubvunzo wangu: pane iro kadhi here kwandinogara?
Zvakanaka, ndanga ndichitsvaga ruzivo uye ini handina chandakawana.
Zvino ndawana chitsva ichi.
Sezviri pachena, kune makumi matatu nematatu makoloni anotongwa nekanzuru yeguta. Ivo vanogona zvakare kukuzivisa iwe ipapo.
Conchi Orts akadaro
Mhoro Monica, nezuro ndanga ndichiudza muzukuru wangu kana ndaita zvese zvinobvira kubatsira ava
mhuka? uye akapindura kuti ndanga ndaita zvese musimba rangu, izvo kutora
kuziva kwekusaruramisira uye kuita zvinoenderana uye usatarise kure, asi ndakadaro
isa ruoko kuti uvabatsire. Mashoko emuzukuru wangu andizadza netariro,
Akatobatsira nekutenga midziyo yavanoda yekudya nemvura uye
Ndofunga. Akandiperekedza mumazuva andakanzwa kutya uye kushaya zvekuita uye ndakachema uye
Ndati uri chokwadi, chingotarisa mumaziso eaya akasuruvara ane mvere, uku kutaridzika kwenyoro,
kunzwa kuda kuvadzivirira.
Iko zvino katsi idzi dzakatonyoreswa semakwenzi emakwenzi ane Mudziviriri mu
CES chirongwa uye ini ndiri muchengeti wako nemumwe munhu.
Uye kupedzisa kutaura nyaya iyi, ndakakunyorera iyi nhetembo.
Makati aya ane mavara akanaka.
Ini ndinotarisa kusabatsira kwake pakati pemugwagwa,
Ndinotarisa maitiro avo ekutya uye kushamisika.
Ini ndaigona kubata miviri yavo midiki nekunyarara kwavo
kana ndaunza ruoko rwangu padhuze nekusuwa kwako,
inzwa manzwiro ako pakati peminwe yangu kana pamwe
kungirozi iri kuchema pane aya kitsi,
mune ichi chikuru kukanganwa kwevanhu.
Pindura Conchi Orts
Ndiri kufara kwazvo kuti katsi idzo dzine mumwe munhu uyo, zvirokwazvo mukuwedzera pakuvapa chikafu nemvura, anovapawo rudo rwakawanda 🙂.
Nenzira, nhetembo yakanaka!
Inonzwika senge chiyero chikuru kwandiri. Mumugwagwa mangu mune mudzimai anozvipira kufudza katsi mumugwagwa, mugwagwa unosemesa, unonhuwirira zvinotyisa kukatsi uye tsvina haugone kufamba nembwa yako (kwandiri ndine imbwa diki) nekuti Katsi dzinofembedza uye dzinozvikanda pamusoro pembwa, mukadzi anofunga kuti ari kuita zvakanaka, asi chinhu chimwe chandichataura kune avo vakazvipira kudyisa mhuka idzi, kana muchinyatsoda kuvabatsira, munotora kumba uye Unopa imba, nekuti mumugwagwa haisi kungo netsa chete asi mhuka idzi dzinowanzo pinda mumainjini emota kunyanya munguva yechando uye vazhinji vanofa vapiswa, vanomhanya nepakati pemugwagwa, vanopinda mumakombi emarara. uko kwavanodya tsvina uye kubata zvirwere nekuzvirera mumugwagwa zvinokurudzira kuti varambe vachiberekana uyezve kune dzimwe katsi dzakarasika uye dzakasiiwa saka rega ndikutaurire zvakashata zvauri kuitira mhuka idzi uye ini ndinotsunga kutaura kuti ndizvo kutovabata zvisina kunaka nekuti Iwe unowedzera chokwadi chekuti kune katsi dzakawanda dzinogara mune dzakashata mamiriro uye kuve neyakaipa hupenyu hwehupenyu.
Ross, ini pachangu ndinonzwisisa kuti kune vanhu vasingade katsi, asi zvinoita kunge zvisina hunhu kwandiri kutaura kuti munhu anovaitira hanya anovashungurudza. Vazvipiri, sekuudzwa kwandinoitwa nachiremba wemhuka, hatifanire kuchengeta katsi dzakarasika, asi makanzuru eguta. Asi isu tinoziva kwazvo kuti mamasipala anowanzosarudza kuvabayira. Ungauraye sei katsi ine mwedzi miviri yekuzvarwa?
Iko hakuna nzvimbo yemunhu wese, izvo zviri pachena. Asi kuvabayira haisi sarudzo. Chingangobatsira zvakanyanya ndechekuti ivo vaite mishandirapamwe yekurerekera, sezvo vanozvipira ava vachishandisa mari kubva muhomwe dzavo kuti vachengete katsi dzisiri dzavo uye vasina mhosva yekuperera mumugwagwa.
Idzi mhuka, izvi zvipenyu, zvinogara mumigwagwa yedu, mapaki, matongo ... nekuti mu
pane imwe nguva, "chipfuwo" chikara chakarasika, kana kazhinji, chakasiiwa
kumhanza yake ye "vanhu vanoshamisa."
Rudzi rwevanhu nezvose zvakakukomberedza, mune angangoita ese akasiyana, njodzi
inoenderera kune feline mumugwagwa.
Mumaguta edzimwe nyika, mhuka idzi dzinochengetedzwa, dzinotarisirwa.
Katsi "dzekurarama" dzinofanira kuchengetwa, kuchengetedzwa ...
uye kwete kutambudzwa kana kutsakatiswa.
Ivo vachengeti veVadziviriri vanochengeta mafine colonies, tevera vamwe
hutsanana nemitemo yekudya, kudzivirira kuve kunetsa kune vamwe vanhu
uye vanoita zvese zvavanogona kuti vadzivirire.
Ndatenda nekutaura kwako, Conchi.
Isu tinotarisira kubatsira kusimudzira ruzivo nezvehunhu hwemhuka, uyezve, nerubatsiro rukuru runodiwa nekitsi dzaive nerombo rakaipa zvekuzvarwa mumugwagwa munyika umo kururamisira mhuka kunosiya zvakanyanya kudiwa.
M.ANGELES RICO akadaro
Mhoroi, ndinoda kuziva kana aya marudzi emakadhi akapihwa muAlicante capital.
Pindura kuna M.ANGELES RICO
Mhoro M. Angeles.
Maererano ne chitsva ichi sí.
Vicente Caballero akadaro
Mhoroi, ndinoda kuziva kana mu Mostoles ivo vachipa iyi kadhi.
Pindura Vicente Caballero
Kutaura chokwadi handizive. MuParla ndakaverenga kuti hongu, saka zvimwe chete muMóstoles ivo vanotozvipawo kana ivo havazove vakawanda.
Ndinokukurudzira kuti utarise nehoro yeguta kuti uone. Ndinovimba pane rombo rakanaka.
Mhoroi, ndinogara muTenerife uye ndinoda kuziva kana pano zvichikwanisika kuwana rezinesi rekudyisa katsi dzakarasika sezvo paine vanhu vanotyisidzira kukumhan'arira kana vachikuona uchipa katsi dzemumugwagwa.
Pamwechete muSanta Cruz de Tenerife unogona kubvunza, asi tinokurudzira kuti ubvunze kuhoroji yeguta reguta rako, nekuti ivo vachakwanisa kukuzivisa zviri nani kupfuura isu.
Uye kanzuru yeguta reSan Roque inokubhadharisa iwe kudyiswa katsi. Handikwanise kuzvitenda asi ichokwadi. Ivo havapi kana sendi rekutemera. Vanhu vamwe nevamwe tinozviita nemari yedu uye pamusoro pezvo nekuzvibhadharisa.
Ehe, muSpain mutemo wekuchengetedza mhuka unoratidzika kunge uri wepamusoro pebasa kupfuura chero chinhu chipi zvacho ...
Pane nzira refu, refu yekufamba zvakadaro.
Katsi inotora nguva yakareba sei kuti ikure?
Iyo yakashongedzwa katsi Khao Manee